१० वर्षमा ७ पटक गर्भपतन- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १०, २०७६ फातिमा बानु
काठमाडौं — उमेरले तीन दशक पनि नकाटेकी उनको अनुहारमा चाउरी देखिन्छ । शरीर पनि ख्याउटे । काखमा पाँच सन्तान । थोरै काम धेरै थकानले उनी दिक्क भइसकिन् । २७ वर्षको उमेरमा ७ पटक गरेको गर्भपतनका कारण उनी मानसिक र आर्थिक हिसाबले कमजोर भइसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पाँचचोटी त औषधि खाएर बच्चा फालें । २ पटक अपरेशन गरें ।’
श्रीमान्ले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न नमानेपछि धेरै पटक गर्भपतन गर्नर्कुो विकल्प नपाएको उनले बताइन् । यति मात्रै होइन श्रीमानले आफुलाई पनि साधन प्रयोग गर्न नदिने उनले दुखेसो गरिन् । प्रत्यकपटक गर्भपतन गर्न जाँदा स्वास्थ्यकर्मीले ‘साधन प्रयोग किन नगरेको’ भन्दै हकार्दा उनलाई स्वास्थ्यचौकी जान समेत तनाव लागिसकेको छ । धेरैपटक गर्भपतन गरेका कारण महिनावारी गडबडी र पाठेघर संक्रमणको शिकार भइसकिन् उनी । अझै कति पटक गर्भपतन गराउनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले पनि उत्तिकै सताएको छ उनलाई ।
उनी जस्तै थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा असुरक्षित गर्भपतनका जटिलता लिएर दिनहुँ महिला इमर्जेन्सीमा भर्ना हुन्छन् । अत्याधिक रक्तश्रावले बेहोश हुने । औषधि सेवनपछिको रक्तश्राप नरोकिने र संक्रमणका समस्या लिएर बढी आउने अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालकी प्रशासन प्रमुख रानु थापा भन्छिन्, ‘तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन नगराएका कारण कति त आधा गर्भ पेटमै छुटेका समस्या लिएर आउँछन् । धेरै दिन अस्पताल भर्ना भएपश्चात मात्रै उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ ।’
विशेषज्ञका अनुसार धेरैपटक गर्भपतन गराउँदा महिलाको ज्यानै जान सक्ने खतरा हुन्छ । गर्भपतनको जोखिमबारे जानकार नभएका महिलाले यसलाई परिवार नियोजनको साधनको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँदै स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले भने, ‘जतिपटक शरीरभित्र उपकरण छिरायो उति नै पाठेघर संक्रमित हुने जोखिम बढ्छ । असुरक्षित गर्भपतनले पाठेघरको क्यान्सर नै गराइदिन सक्छ ।’
रक्तश्राव नरोकिएर कति महिलालाई आइसीयू र भेन्टीलेटरको साहरामा राख्नुपर्ने स्थिती आउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले मिर्गौला फेल गराएर ज्यान समेत जानसक्छ । यौन सम्पर्क राख्दा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरी सकेसम्म गर्भपतन गर्नुपर्ने स्थिती नै आउन नदिन डा.सुवेदीको सल्लाह छ ।
गर्भपतन नै गर्नुपरे नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेका स्वास्थ्य संस्था र तालिमप्राप्त चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संठगनको तथ्याकं अनुसार असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताका कारण विश्वव्यापी ५० लाख महिला विभिन्न रोगबाट ग्रसित छन् । १३ प्रतिशत मातृमृत्युदरको कारण पनि यही हो । विश्वमा प्रतिवर्ष करीब ५ करोड महिलाले गर्भपतन गराउँछन् । ४५ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित नै हुने गरेको छ । यसले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अवसरहरूमा बाधा पुर्याइरहेको छ ।
२० वर्षमुनिका किशोरीले गर्भपतन गराउँदा उनीहरूमा बाँझोपन समेत बढ्ने डा. सुवेदी बताउँछन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था किशोरकिशोरीमैत्रीपूर्ण नहुँदा उनीहरू असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेलिएका छन् । असुरीषत गर्भपतन घटाउन निशुल्क सेवामा मात्रै लगानी नगरि सरकारले गर्भपतनबारे विद्यालय, घर र समुदायलाई नै सचेत गराउनुपर्ने प्रसूति गृहको गर्भपतन सेवा इन्चार्ज जयन्ती छत्यालले बताइन् ।
‘गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाइसक्यो र यो निशुल्क छ भन्ने शहरका शिक्षित महिलालाई नै थाहा छैन । यहाँ आएका अधिकांशले गर्भपतन सेवाको शुल्क सोध्छन्,’ उनले भनिन् । गोपनियतामा ढुक्क हुन नसक्दा कमै मात्रै किशोरी यो सेवा लिन आउने गरेको उनले बताइन् ।
१६ वर्षअघि गर्भपतनले नेपालमा कानूनी मान्यता पायो । कानूनी मान्यता पाएसँगै सरकारी संस्थाबाट निशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि सुरु भयो । १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि विभिन्न कारणले महिला अझै असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेलिरहेका छन् । कृपाले २०१४ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा गर्भपतन गर्ने आधाभन्दा बढीले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराइरहेका छन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ले महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यान जन सक्ने खतरा भए मञ्जुरीमा त्यस्तो गर्भपतन गराउन मिल्छ । गर्भवती महिलालाई करकाप गरी, डरधम्क्याई या कुनै प्रलोभनमा पारि गर्भपतन गराउन भने कानूनले बन्देज लगाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १६:३८
भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकप्रति कांग्रेसको आपत्ति [भिडियोसहित]
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने कार्यविधि शासनविपरीत भएको जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको प्रारम्भमै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनसम्बन्धी संशोधन गरिएको कार्यविधि फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे।
“उच्च र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नु राम्रो पक्ष हो, पछिल्लो कार्यविधि संशोधनबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको छ”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री स्वदेशमा नभए पनि उनकै अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गर्नु ठीक होइन, भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बैठक गर्दा सूचना चुहिने मात्र होइन, गोपनियता नरहने र लिएको शपथविपरीत हुन जान्छ।”
प्रमुख सचेतक खाँणले प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा उनको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यभार तोकिएको जानकारी सभामुखले संसद्लाई गराइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट बैठक बस्दा कार्यवहाक तोकिनुको अर्थ के रह्यो भनी प्रश्न गरे।
बैठकमा प्रमुख सचेतक खाँणले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसकोतर्फबाट स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरे।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १६:१९
कहिले बन्‍ला कोरोना विरुद्धको औषधि ?